Photo နှင့်ပတ်သက်သော Software များ၏ မာတိကာ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Photo နှင့်ပတ်သက်သော Software များ၏ မာတိကာ
ACDsee 10.0.219 with Keygen By Tha Toe Naung®
ACDsee 10 with keygen (full) By KZaw
ACDSee Photo Manager 2009 By ညီနေမင်း
ACDSee Pro 2.5 By ညီနေမင်း
ACDSee Pro 3.0 + Serial By phyothuhein
ACDSee Photo Manager 2009 11.0 Build 85 By minwain
ACD see 10 By zawlinoo
Auto Collage Studio 2.25 By ဖြိုးယံလေး
Amazing Photo Editor V7.0 (Portable) By tu tu
AMS Beauty Studio 1.35 (Protable) By ဖြိုးယံလေး
ACDSee (Protable) By ဖြိုးယံလေး
Beauty Wizard 3.3 By ko myo
Beauty Pilot 2.2 By lehonchan
cartoon photo maker By PyaitSone
Carnisoft Caricature Studio v 3.0.0.1 By KTM
COREL Paint Shop PRO Photo X3 13.00 || FULL VERSION By specialspecial
Fun Photo By ဖြိုးယံလေး
Fotosizer 1.13.0.232 By ဘိုးတော်
Face Gen 3D Modeller By sawjonnie
FaceFilter Studio Edition 2.0.1120.1 By လူဖုန်း
FaceFilter Studio Edition 2.0.1120.1 By ကိုပိုင်
FaceOnBody 2.4 (Portable) By zmhtut
Frame Photo Editor 5.0.2 By phoetharlay
Image Resizer By phyothuhein
Liang Zhu Software Photo To Cartoon v4.08 (Portable) By ဖြိုးယံလေး
Morpheus Photo Animation Suite 3.11 Build 4142 (Protable) By tu tu
Nutsoft Nature Illusion Studio 2.8 By Aung Aung
Nufsoft Nature Illusion Studio v2.80 By sawjonnie
Nature Illusion Studio 2.73 ၊ 2.71 ၊ 2.60 (Portable)၊ 2.50 ၊ 2.40 ၊ 2.30 ၊ 1.91 By sawjonnie
Nature Illusion Studio Professional v3.12 By ဖြိုးယံလေး
Nature Illusion Studio 2.8 (Portable) By sawjonnie
Photoinstrument v2.0.build.177 ၊ Face smoot full ၊ Beauty Studio By ဖြိုးယံလေး
Photodex ProShow Gold 4.0.2532 (777.91 KB) By ဖြိုးယံလေး
Photoshine 2.0 By ဖြိုးယံလေး
Photoshine v2.0.800 (Full version) + Keygen By ဖြိုးယံလေး
PhotoScape 3.4Software By ဖြိုးယံလေး
PhotoScape 3.3 By ဖြိုးယံလေး
Picture Collage Maker By ဖြိုးယံလေး
Photo Collage Maker Pro 2.0.6 By ဖြိုးယံလေး
Photo Collage Studio By နေဦးသစ်
Paint Shop Pro Photo X2 By ညီနေမင်း
Paint.NET 3.50.3480.39777 By ညီနေမင်း
Photodex ProShow Producer By someone
Portrait Professional Max 6.3.5 By someone
PhotoShine 2.05 (22.6 MB) By kyawminkhoung
Photo Collage Master ၊Photo Dream ၊ Photo Scenery By ဆန်းမောင်
Photo Slideshow ShowMe v2.0 FULL VerSion By phyothuhein
Photodex ProShow Gold 4.0.2549 By phyothuhein
Photodex ProShow Gold 4.1.2737 By phyothuhein
Photo Scape 3.4 By phyothuhein
Picture Resize Starter 4.5.12 By phyothuhein
Photo Screensaver Maker 4.82 By phyomyintthein
Picture Reduce Wizard 2.1 By minthike
Photo DVD Creator v7.7 By Ye Naung
Passport Photo v2.0.2 By Ye Aung
Paint.NET 3.10-Final By zthet
PaintNET 3.30 Portable By sawjonnie
Paint.NET 3.10-Final By sawjonnie
Photo.Pos.Pro.Photo.Editor.V.1.50 By kothu
Photo frame show 1.3 By လူဖုန်း
Photo To Cartoon By လူဖုန်း
Photo To Cartoon By PyaitSone
Photoimpact X3 By ပြည့်ဖြိုး
Photo to Color Sketch 2.5 By မောင်တေဇာဝင်း
Photo Calendar By ကိုပိုင်
Picture finder pro 2.7 By Tha Toe Naung®
PIX resizer (Protable) By konge
PageMaker.v7.01.(Portable) By sawjonnie
Portable Paint NET - 3.30 (Protable) By sawjonnie
Photo Collage Maker (Protable) By ဖြိုးယံလေး
Photoshine Protable 2.0 (Protable) By ဖြိုးယံလေး
Photo Stamp Remover 1.2 (Protable) By ဖြိုးယံလေး
Photo Art Studio 2.15 (Protable) By ဖြိုးယံလေး
photo dvd maker pro 7.95 (Protable) By ဖြိုးယံလေး
Photoscape v3.4 (Portable) By ဖြိုးယံလေး
PhotoShine 2.05 (Portable) By phyothuhein
Reshade Image Enlarger 1.36 By PyaitSone
Reflection Generator By phyomyintthein
Recolored v1.0.1(Portable) By KTM
Red Eye Pilot v3.4.1 (Portable) By ko myo
Ulead Photo Express 6.0 By bonge
Ulead Photo Express 6.0 crack By မင်းသီဟထွန်း
Ulead PhotoImpact X3 By sawjonnie
Virtual Plastic Surgery 1.0 (Protable) By someone
VSO Image Resizer 3.0.1.55 (Portable) By phyothuhein
Wondershare Photo collage studio v 4.2.9.1(Portable) By ဖြိုးယံလေး
Zeall Soft Fun Morph 7.20 By KTM
ZeallSoft FunPhotor v9.58 By ဘိုးတော်
Last edited by ဖြိုးယံလေး; 25-10-2010 at 11:28 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 46 ဦးတို့မှ ဖြိုးယံလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ငါးကြော်, ဆန်းမောင်, ထွန်းမင်း, နီထွန်းဦး, ပုထုဇဉ်, မှတ်ပုံတင်ရန်, ရဲရဲလေး, ရဲသွေးန်း, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, သီဟန်စိုး, သူသူလေး, အသေးလေး(4tL), ဦးသာကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်လွင်ဦး, မြင့်မိုရ်, မြပန်းခက်, aeiou, alwslov, Aung Aung, aungphyo, AZM, bonge, goldstar, hellboy, htoo war, ko lin, kyaukphyu, KznT, Lwin Thu, Myo Min Zaw, orange.lay405, phoetharlay, phyomyintthein, sAnDViper, smlat88, thureinsoe, tu tu, wunna313, yawnathan, Zaw Min Han, zo
ပြန်စာ - Photo နှင့်ပတ်သက်သော Software များ၏ မာတိကာ
တကယ့်ကို အဖိုးတန်တဲ့ Post လေးပါ။ အရမ်းအသုံးတည့်တဲ့ ရေးသားချက်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ အောင်လွင်ဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, lifemark, zo
27-12-2010, 01:16 PM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါသည်။ အခုလိုဆော့ဝဲလ်လေးတွေအများကြီး တင်ထားပေးတဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိပါသည်။ ဆော့ဝဲလ် အသစ်
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ hteinlinn26 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရဲရဲလေး, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်သံသရာ, zo
Find More Posts by hteinlinn26
Hello, မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ အခုမှလေ့လာဆဲမို့ ရှာဖွေနေဆဲမို့ ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ hteinlinn26 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ wunna313 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by wunna313
သေတဲ့ လင့်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာလေးမှာ လာပီး တောင်းဆိုခိုင်းထားတာလေးတွေ
ရှိပါတယ် အကိုလိုချင်တဲ့ လင့်ကိုပြောပါ ကျွန်တော်တို့ အတက်နိင်ဆုံး ပြန်တင်ပေးပါမယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သမီး, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်သံသရာ, alwslov, goldstar, zo
ကောင်းတယ် ခုချိန်မှာ သတိမရသေးဘူး လိုပြီဆိုမှ လာယူသုံးမယ် ဆရာတွေအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kyarminthar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ thuya အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, thetzin, zo
18-02-2011, 03:12 PM
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 22 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Vinci Photo Collage software လေးများရှိရင် တင်ပေးကြပါဦး သူငယ်ချင်းတို့ရေ..........
Key ပါတဲ့ Full Version လေးများရရင် ပိုကောင်းပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Jaincool အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by Jaincool
Photo နှင့်ပတ်သက်သော Software များ
ကို Jaincool - Photo နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Software တွေတော်တော်များများ လိုနေတယ်ထင်တယ် - ဒီနေရာမှာ တောင်းထားတဲ့ 5dfly photo design က တော်တော်ရှာလိုက်ရတယ်ဗျ - တွေ့ပေမယ့် Serial မပါ ဘာမပါ ဖြစ်နေလို့ - နောက်ဆုံး တစ်ခုတော့ သွားတွေ့တယ် - dl4all မှာ 5DFly Photo Design 2.18.3 ဆိုပြီး - နောက်ပြီး Vinci Photo Collage တော့ မတွေ့မိသေးဘူး - သူ့လိုမျိုးပဲ Photo Collage Creator 3.61 + Serial ဆိုတာတော့ တွေ့မိတယ် - အဲတာ အောက်မှာ တင်ပေးထားတယ် - အင်တာနက်ထဲက ဖိုတိုနဲ့ ပတ်သတ်မျှ အသုံးဝင်လောက်မယ့် Apps လေးတွေလည်း တစ်ခါတည်း ဒီနေရာမှာ ပေါင်းပြီး တင်ပေးလိုက်တယ် - လိုတော့လည်း ယူပေါ့ - Serials တို့ Patch တို့တော့ အားလုံးပါပြီးသား -
( 1 ) 5DFly Photo Design 2.18.3.rar 56.834 MB
(2) AMS Photo Effects 2.77 Software.rar 16.030 MB
(3) Ashampoo_photo_optimizer_3_3.12_sm.rar 11.234 MB
(4) Home Photo Studio v2.96 with SERIAL [h33t][mkrandow].rar 54.231 MB
(5) Imagic Photo v8.0 + Serial.rar 6.694 MB
(6) Odin.Frame.Photo.Creator.5.3.1.rar 20.376 MB
(7) Photo Calendar Maker 1.71 incl serial-slicer.rar 19.703 MB
( 8 ) Photo Collage Creator 3.61 + Serial.rar 19.098 MB
(9) Wondershare Photo Recovery 2.0.0.8 [vokeon].rar 3.197 MB
တကယ်လို့ Ifile ကနေ Download ချလို့ မရခဲ့ရင် နောက်တစ်နေရာကနေ ဒေါင်းလုပ်ချလို့ ရအောင် -
( 1 ) 5DFly Photo Design 2.18.3.rar (56.8 MB)
(2) Acme Photo ScreenSaver Maker 3.20 Incl Serial Key [vokeon].rar (122 B)
(3) AMS Photo Effects 2.77 Software.rar (16 MB)
(4) Ashampoo_photo_optimizer_3_3.12_sm.rar (11.2 MB)
(5) Home Photo Studio v2.96 with SERIAL [h33t][mkrandow].rar (54.2 MB)
(6) Imagic Photo v8.0 + Serial.rar (6.7 MB)
(7) Odin.Frame.Photo.Creator.5.3.1.rar (20.4 MB)
( 8 ) Photo Calendar Maker 1.71 incl serial-slicer.rar (19.7 MB)
(9) Photo Collage Creator 3.61 + Serial.rar (19.1 MB)
( 100Wondershare Photo Recovery 2.0.0.8 [vokeon].rar (3.2 MB)
Last edited by KznT; 18-02-2011 at 05:55 PM..
ဒဿဂီရိ, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မြင့်မိုရ်, ဖြိုးယံလေး, alwslov, bonge, g00gle, Jaincool, ko lin, kwarsi, kyaukphyu, Lwin Thu, moe gyi, openeyes, thurein, zo
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ blackfire အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, mercury, zo
Photoshop CS2 or CS3 software များ ရှိရင်ဘယ်နားမှာ ရှာမလဲခင်ဗျား။
ပြန်စာ - Photo နှင့်ပတ်သက်သော Software များ၏ မာတိကာ
ဒီနေရာမှာ ပြောပေးထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါလေး တစ်ချက်လောက် သွားကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ... အဆင်ပြေပါစေ...
စောလွင်, မောင်သံသရာ, PyaitSone, zo
Recovery Software များ၏ မာတိကာ Myo Min Zaw Applications215-02-2012 08:17 AM
COREL Paint Shop PRO Photo X3 13.00 || FULL VERSION specialspecial Applications013-02-2010 02:17 AM